धराने मोडल प्रेसिकाको रुपको जादुमा लट्ठ भए गायक नवराज राई (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
धराने मोडल प्रेसिकाको रुपको जादुमा लट्ठ भए गायक नवराज राई (भिडियो सहित)
“हारै हार” बोलको पहिलो गीतले सफलता हात पारे पछि लामो समयको अन्तरलमा गायक नवराज राई आफ्नो दोस्रो नया गीत लिएर दर्शक श्रोता माझ आएका छन् । उनको “तिमी नै” बोलको गीत आज मात्रै रिलिज भएको छ । गीतमा स्वयम गायक नवराज राईकै शब्द संगीत र स्वर समावेश रहेको छ । गीतलाई अरेन्ज गर्ने काम भने प्रदिप श्रेष्ठले गरेका छन् ।
पहिलो गीतले राम्रो चर्चा पाए पछि केहि नया र राम्रो नै लिएर आउने तयारीमा उनले लामो समय ज्ञाप लिएर बुझिन्छ । हुन त उनको ब्यस्त समयलाई पनि उनको नया प्रस्तुति आउन ढिला भएको मान्न सकिन्छ । तर पनि उनले सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर अन्तत अहिले दोस्रो गीत सार्वजनिक गरेका छन् ।
रोमान्टिक भर्सनको उनको यस दोस्रो गीतको शब्द र संगीत पक्ष बलियो देखिन्छ । गायक नवराज राईको स्वर अत्ति नै राम्रो रहेको कुरा त उनको पहिलो गीतले नै साबित गरिसकेको थियो तर गायन संग संगै लेखन र संगीत विधामा समेत अब्बल रहेको कुरा भने उनले अहिले साबित गरेका छन् ।
उनको यस नया गीतको भिडियो पनि सुन्दर नै तयार भएको छ । बुद्ध थापा मगरको छायांकन र सम्पादन रहेको भिडियोलाई राकेश किरातीले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा मोडल प्रेसिका निरौलाले अभिनय गरेकी छिन् । भिडियोमा केहि प्रतिशत दृष्यांकन नेपाल बाहिर र केहि प्रतिशत नेपाल भित्रको रहेको छ ।
पेशाले सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत उनि यति बेला सिंगापुरमै बसोबास गर्दै आईरहेका छन् । यो कुराले नै उनको व्यस्तता कति रहेको छ भनेर प्रष्ट पार्दछ । तर समयलाई मिलाउदै उनले गीत संगीतलाई भने छोडेका छैनन् । लामो समय ज्ञाप लिएरै पनि प्रस्तुति भने उनले उत्कृष्ट नै दिन खोजेको देखिन्छ ।
दर्शक श्रोताहरुले आफ्नो नया प्रस्तुति अवश्य पनि मनपराउनु हुने विश्वास उनले लिएका छन् । यस्तै उनले आफ्नो यो दोस्रो गीत सुनेर प्रतिक्रिया प्रदान गरिदिनुहुन सबै नेपाली दर्शक श्रोताहरुलाई हृदय देखि नै अनुरोध समेत गरेका छन् ।-
Prevचाइनाको चर्चित पत्रिकामा पहिलो पृष्ठमै ओलीको अन्तवार्ता आएपछि भारतमा हंगामा ( पुरा विवरण सहित फोटोफिचर)
Next‘“सरकारी बिदाले गर्दा नेपाल काम गर्नेभन्दा आराम गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिन थालेको छ : जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री पण्डित
वाह रमेश बधाई ! रमेश प्रसाईंले जिते पब्लिक स्पिकर नेपाल सिजन-२ को उपाधि… बिबरण सहित हेरी शेयर गरौ
जनस्तरबाट बन्दै गरेको गौत्तम बुद्द क्रीकेट रङशाला निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरले गर्यो यति ठूलो सहयोग !…
सुन एक वर्षयता सबैभन्दा महँगो । कति पुग्यो त? हेर्नूहोस